Mila fanovana ny fanaovana politika | NewsMada
Mila fanovana ny fanaovana politika
Hatramin’ny fotoana farany, nampitsanga-mitoetra be ihany ny fametrahana ny firotsahan-kofidina ho ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna, izay hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao. Sarotra ny fahazoana ireo taratasy ilaina? Na mbola misy ny fifampiandrasana noho ny kajikajy sy paipaika politika… Mety ho antony avokoa izany.
Nefa tsy azo odian-tsy hita ny amin’ny tsy faharisihan’ny antoko politika handrotsaka kandidà, fa manohana izay harotsaky ny hafa. Mety mbola antony amin’izany koa ny hoe midangana loatra fa lasa avo roa heny ny anto-bola fahazoana mirotsa-kofidina, na sarotra ny mitady kandidà ho an’ny kaominina any ambanivohitra, ohatra.
Tsy mahagaga raha ny avy amin’ny tsy miankina no maro anisa amin’ireo mpirotsa-kofidina, mitaha amin’izay atolotry ny antoko na vondrona politika. Efa hatramin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika sy ny fifidianana solombavambahoaka izay, fa tsy vao izao. Tsy manao sy mahavita ny andraikiny ny sasany amin’ireo antoko politika?
Natao andanian’ny tena na ny mpikambana vola, ohatra, ny antoko politika, mila mivonona mandrakariva amin’izay mety ho lany amin’ny fanaovana politika. Anisan’izany ny fiatrehana ny fifidianana, ny fanaovana kongresy, ny fananganana sampana… Fa tsy ny antoko politika no hatao hahazoam-bola amin’ny fakana toerana sy fahefana…
Tsy mbola izay ny fanao sy kolontsaina politika eto? Tsy mahagaga raha sahirana miatrika fifidianana ny sasany. Nefa izay no tena maha izy azy na antom-pisian’ny antoko amin’ny fakana fahefam-panjakana ara-dalàna. Saika izay eo amin’ny fitondrana na izay teo amin’ny fitondrana farany ihany no hoe matanjaka sy manjaka?
Izany rehetra izany koa no mahatonga ny ankamaroan’ny antoko politika miandry kendry tohina fotsiny amin’ny fisehoan-javatra na krizy politika mba hahazoana fahefam-panjakana? Voka-javatra izao tsy faharisihana izao, fa tsy anton-javatra itadiavana fanamarinan-tena. Tena mila fanovana ny fanaovana politika…
Hafa ihany ny efa vonona, sahy, efa niomana ela… ?